स्थानीय तहको चुनावमा मतदान गर्ने समय आउन मात्र एकसाता बाँकी छ । राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दर्ता गरेकाहरूलाई घरदैलो गर्न भ्याई नभ्याई छ ।
झन्डै डेढ लाख हाराहारी उम्मेदवारहरू भोट माग्ने चटारोमा रहेका बेला काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुखका लागि उम्मेदवारी दिएका दीपक सिलवालले भने आ`म`र`ण अ`नसन थालेका छन् ।
बिहीबारदेखि काठमाडौँको मध्य बानेश्वरमा रहेको चिनारी बोइज होस्टेलमा उनले आम´र´ण अनसन थालेका हुन् । होस्टल सञ्चालकले माला र उनको संस्था ‘घर आँगन नेपाल’का कोषाध्यक्ष प्रवीण ढकालको हातबाट टिका र खादा लगाएर सिलवालले आमरण अनसन सुरु गरेका हुन् ।
उनको आम´र`ण अनसनको एकसुत्रीय माग छ–‘सरकारले हेलिकोप्टर खरिद गर्नुपर्ने ।’
सरकारले किन हेलिकोप्टर खरिद गर्नुपर्‍यो त ?
‘गर्भवती महिला सुत्केरी हुने बेला अका`ल मृ`त्युबाट बचाउन उ`द्धा`रका लागि सरकारले छुट्टै हेलिकोप्टर खरिद गर्नुपर्छ भन्ने मेरो माग हो । नेपालका दु`र्ग`म जिल्लाका गाउँ बस्तीमा सुत्केरी हुने बेला समयमै अस्पताल पुग्न नपाएका कारण धेरै महिलाले ज्यान गु`मा`उनु परेको छ’
उनले भने, ‘सरकारले यसका लागि हेलिकोप्टर खरिद गर्ने प्रतिब`द्धता नजनाएसम्म मेरो आ`म`रण अन`सन जारी रहन्छ ।’ स्थानीय तह निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुखका लागि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका उनले ‘रिक्सा’ चुनाव चिन्ह पाएका छन् ।
चुनाव चिन्ह पाए पनि सिलवाल चुनाव प्रचारका लागि न घरदैलो गर्न निस्किएका छन् नत कसैलाई फोन गरेर नै भोट मागेका छन् । न उनलाई चुनाव जितिन्छ भन्ने आस नै छ । महानगरपालिकामा मात्र ध्यान नदिई देशका दु,र्ग,म भेगमा महिलाको जीवन रक्षाका लागि उ`द्धा`र गर्न हेलिकोप्टर अत्यावश्यक विषय भएकोले त्यसका लागि अनसन बसेको उनले बताए ।
३ महिना अघिदेखि होस्टलमा बस्दै आएका उनले मासिक ११ हजार शुल्क तिर्ने गरेका छन् । यसअघि आफन्तकोमा बस्दै आएका उनले आफ्नो कुनै जागिर नभएका कारण आफन्तको बस्न नसकेको सुनाए ।
कसरी आयो हेलिकोप्टर खरिदको माग ?
तेह्रथुमका ४० वर्षका सिलवालले २०७० सालदेखि ‘किनौँ हेली, बचाऔँ चेली’ भन्ने अभियान चलाउँदै आएका थिए । उनले घरबार तथा आमाबाबु विहीन बालबालिका, शारीरिक रूपमा अपा`ङ्गता भएका, दृष्टिविहीन बालबालिका गरी २९ जनाको रेखदेख गर्न २०७० सालदेखि घर आँगन नेपाल नामक संस्थालाई अघि बढाएका थिए ।
डा.भोला रिजालको सम्पर्कमा पुगेपछि उनले उपचार नपाएका गाउँघरमा गएर निःशुल्क रूपमा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालनको काम गरे । ५ वर्षअघि सिन्धुपाल्चोकको भोटसिपा भन्ने ठाउँमा स्वास्थ्य शिविर गरेको र पछि सोही ठाउँबाट गर्भवती महिलाको ज्यान जो,खिममा रहेको भनेर फोन आएपछि उनले निजी हेलिकोप्टर खोजेर सन्तमाया तामाङको उ`द्धा`र गरेको बताए ।
त्यसयता उनले विभिन्न व्यक्तिसँग सहयोग जुटाउँदै सुत्केरी हुने बेला जटिल अवस्थामा पुगेका १२ जना महिनाको हेलिकोप्टरबाट उ`द्धा`र गरेको सुनाए ।
यस्तै नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा ७० गर्भवती महिलाको उद्धार गरेको उनको भनाई छ ।
उनले भने–‘प्रसव पीडामा रहेका महिलाको जीवन जोखिममा हुन्छ । नेपालका दु`र्ग`म भेगमा रहेका उनीहरूलाई तत्काल अस्पताल पुर्‍याउने माध्यम भनेकै हेलिकोप्टरबाट उ`द्धा`र हो । मैले ३ जना सुत्केरीको उ`द्धा`र गरिसकेपछि नेपाल सरकारका सहसचिवको मलाई फोन आएको थियो । उहाँले यो कत्तिको सम्भव छ भनेर मलाई सोध्नुभएको थियो । मेरो कुरा सुनेपछि सरकारले राष्ट्रपति सुत्केरी उ`द्धा`र कार्यक्रम ल्याइएको थियो ।
तर सरकारसँग आफ्नै हेलिकोप्टर नभएका कारण सेनाको वा निजी हेलिकोप्टरको सहयोग माग्नुपर्ने अवस्था छ । उता सुत्केरीको ज्या`न जान लागिसकेको हुन्छ यता हेलिकोप्टरको व्यवस्थापन समयमा हुन सकेको हुँदैन । त्यसैले सरकारले आफैले हेलिकोप्टर खरिद गर्नुपर्छ भनेर मैले माग उठाउँदै आएको हुँ ।’
उनले २ वर्षअघि समयमै हेलिकोप्टर नपुग्दा एक सुत्केरी महिलाको नारी दिवसकै दिन अकालमा मृ`त्यु भएको सुनाए ।
हेलिकोप्टरको ८ लाख ऋण तिर्न बाँकी, अंशको जग्गा सकियो
डा.स्वामी प्रपन्नाचार्यको सेवक भएर बस्दा उनको प्रेरणाबाट समाजसेवामा लागेको बताउने सिलवालले समाजसेवाका क्रममा आफूले पाएको अंश बापतको जग्गा बेचेर सकिएको बताए । समाजसेवामा लागेकै कारण आफूले बिहे नगरेको उनको दाबी छ । उनले भने–‘अहिले म ४० वर्षको भएँ । समाजसेवामा समय दिनुपर्ने भएकोले मैले बिहे गरेको छैन ।
मैले बिहे गरेँ भने समाजसेवा गर्न पाउँदिन । कि मैले श्रीमती रोज्नुपर्ने हुन्छ कि समाजसेवा । श्रीमती रोजेपछि मैले समाजसेवा गर्न पाउँदिन ।’
समाजसेवामा लागेकै बेला बाबुको क्यान्सरका कारण मृत्यु भएपछि झन्डै २ वर्ष आफूले केही गर्न नसकेको उनले सुनाए । अंशको सम्पत्ति, जग्गा बेचेर संस्था चलाएको र सुत्केरीलाई हेलिकोप्टरबाट उद्धार गर्ने अभियान थालेपछि निजी हेलिकोप्टर कम्पनीको ऋण तिर्न नसकेको उनले सुनाए ।
उनले भने–‘सुरुमा हेलिकोप्टर लगेर उद्धार गर्थे, पछि जसले थोरै थोरै पैसा दिन सक्छन् उनीहरूसँग मागेर हेलिकोप्टर कम्पनीलाई बुझाउँथे । दीपकराज गिरीको छक्का पञ्जा टोलीले एक फ्लाइटको पैसा तिरिदिएको थियो, डा. भोला रिजालले अर्को फ्लाइटको पैसा तिर्नुभएको थियो ।
मलाई हेलिकोप्टर कम्पनीले उधारो पत्याउन थालेको थियो । पछि १० लाख जति ऋण कम्पनीलाई तिर्नुपर्ने भएको थियो । २ लाख पछि तिरेँ । अझै ८ लाख तिर्नुछ । एयरलाइन्स कम्पनीले प्रहरीमा थुनाउँछु भन्ने गरेका छन् । सरकारले आफ्नै हेलिकोप्टर भएको भए मेरो यस्तो अवस्था आउने थिएन ।’
उनले गर्भवती महिला उ,द्धारका लागि सरकारले हेलिकोप्टर खरिद नगरेसम्म आफ्नो अनसन जारी रहने बताए ।
उनले भने–‘एउटा मान्छे म,र्यो भने पनि त्यसको अङ्ग अरू १० जना मानिसमा प्र,त्यारो,पण गर्न मिल्छ रे । बरु मेरो अङ्ग त्यस्ता मान्छेहरूका लागि प्रयोग होस तर सरकारले सुत्केरी महिलाका लागि एउटा हेलिकोप्टर व्यवस्था गरोस् ।’
आ,म,र,ण अनसन थालेसँगै उनले होस्टल सञ्चालकलाई साँझदेखि आफ्नो लागि खाना नपकाउन आग्रह समेत गरेका छन् ।
२०७९ बैशाख २३, शुक्रबार १२:४४0Minutes 187 Views